Miseensi mana maree Keeniyaa daa'ima qabattee paarlaamaa seente ari'amte - BBC News Afaan Oromoo
Biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti dubartiin miseensa mana maree taate daa'ima qabattee waan paarlaamaa seenteef ari'amte.
Aadde Zulekha Hassan akka jettutti, "dhimma ariifachiisaa waan qabduuf" daa'ima ishee qabattee gara hojii dhufte.
Walga'iin paarlaamaa gaggeeffamaa ture TV mootummaa Keeniyaan KBC jedhamuun kallattiin tamsa'aa osoo jiruu yeroo haati mucaa kun daa'ima ishee qabattee paarlaamaa seentutti yeroodhaaf addaan citee ture.
Miseensonni paarlaamaa Ugaandaa waltuman
Miseensonni paarlaamaa wal reeban
Af-yaa'iin itti-aanaa yeroo sanatti paarlaamaa to'achuu dadhabee ture. Sababiin isaas, yeroo haati daa'imaa daa'ima ishee qabattee seentu itti iyyuun jeeqan. Kaan ammoo, ciqileedhaan walitti bubbu'anii akka ajaa'ibaatti walitti agarsiisaa turan.
Dubartii bakka buutuu Kaawontii Kiwaale taate kana, akka isheen paarlaamaa keessaa baatuufis ajajeera Af-yaa'iin Itti-aanaan kun. Wanti dubartiin kun goote "kan kanaan dura ta'ee hin beeknedha," jedhe.
Dubartiin kun boodarra akka geezexeesitootatti dubbatteetti, paarlaamaan kun bara 2013 keessa kutaa maatiidhaaf barbaachisu akka qophaa'u walii galus hanga ammaa wanta hojjete hin qabu.
"Daa'ima koo waliin dhufuu dhiisuudhaaf yaalii godheen ture garuu har'a wanta ariifachiisaa ta'e hojjechuun narra jira ture. Osoo paarlaamaan mana daa'imman keessa tursiifatan qaba ta'ee achi keessan kaa'a ture," jette.
"Yeroo caalmaatti dubartoonni baay'een gara paarlaamaa akka dhufan gaafataa jirrutti, bakka maatiidhaaf mijataa ta'e qopheessuu barbaachisa," jette Zulekha Hassan.
Akka dambii mana marichaatti, "keessummoonni" daa'imman dabalatee kutaa sana keessa seenuun hin hayyamamu.
Diraamaan ta'e kun miidiyaalee hawwaasummaa irratti falmii guddaa kaaseera. Namoonni tokko tokko dubartii kana jajuun, biyyoota biroo daa'imman isaanii akka qabatanii dhufan hayyaman eeru.
Kaan ammoo, fuula tiwiitara isaaniirratti sobdee gurra ergachuuf ykn qalbii hawwachuuf jedhanii ishee qeeqan.
Fuulli Tiwiitaraa Tired Kenyan jedhu tokko ammoo: "Bakka buutuun Kaawontii Kwale Zulekha Hassan daa'imashee qabattee seenuun Af-yaa'ii mana mareetiin paarlaamaa keessaa ar'imate.
Biyya biraatti garuu daa'imman isaanii harma hoosifataa falmii paarlaamaa keessaa gaggeessu," jechuun barreeffama dhiyeesseera.
Paarlaamaadhuma Keenyaa kana keessatti kanaan duras miseensi mana maree tokko miseensa paarlaamaa bitaatiin kabalamuun ishee ni yaadatama.
Miseensonni paarlaamaa Ugaandaa umurii pireezidantii irratti waltuman
Keeniyaa: Miseensi paarlaamaa hirriyaasaa kabaluusaatiif to'atame
Waancaa Addunyaa 2018: Miseensoti paarlaamaa bajata mootummaan Raashiyaatti imalan komataman
Viidiyoo Miseensonni paarlaamaa Ugaandaa umurii pireezidantii irratti waltuman